Puntland oo ku hungowday Muqdisho & Qoondadii Ciidamadii Xoogga dalka oo laga qadiyey
GAROOWE(P-TIMES) – Guddiga Isku dhafka ciidamada Soomaaliya ayaa labo sanno kahor magaalada Garoowe, kula wareegay ciidamo gaaraya 3000 Askari, kana tirsanaa ciidamada Daraawiishta Puntland, waxayna sheegeen in ay bixin doonaan dhammaan Xaquuqda ay u baahan yihiin ciidamadas, taas oo qeyb ka ahayd heshiisyadii ay gaareen Madaxda dawladda Faderaalka iyo kuwa maamul gobaleedyada bilowgii 2017-kii.
Warsidaha PuntlandTimes wuxuu dabagal kuhayaa sababaha rasmiga ah ee u hirgali waayeen balan-qaadkii iyo la wareegidii ciidamada dhan 3000 Askari ee ay la wareegtay dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Waxaan ogaanay in aysan ciidamadaas helin xaquuqda ay helaan ciidamada kale ee ay la wareegtay dawladda Soomaaliya, sida Mushaarka, Caafimaadka, Qoondada Raashinka iyo agabyada Milateri ee ay u baahan yihiin.
In laga mid dhigo ciidamada xooga dalka oo ay ku shaqeeyaan gudaha Puntland ayuu ahaa qorshaha koowad ee talaabadan, laakiin guddiga Amniga Qaranka oo horey ugu heshiiyey arrintan ayaa noqday mid gaabis ah.
Warsiduhu wuxuu ogaaday in ay howshan labo dhinacba ka socon weyday, dhinaca koowaad waa dawladda Faderaalka oo si aan gabasho laheyn u sheegtay in aysan ciidamadas waxba siineyn oo ay ku xirtay sharuudo badan oo ay ka mid yihiin taliskooda, amaradooda, adeegsigooda iyo lacagtooda oo aan la marineyn Puntland.
Taasi, waxay noqotay mid ay diiday Puntland, gaar ahaana arrimaha qaarkood oo ay u aragtay kuwa keeni kara mustaqbal saameyn ay ku yeeshaan Puntland, waxaana sidaas oo ay tahay Puntland ka gashay wada hadal hoose sidii loo dhameyn lahaa, iyadoo kasoo dabacday sharuudaheeda, balse dhinaca dawladda Soomaaliya ayay ka dhaqaaqi waayeen.
Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya oo la wareegay qorshaha dibu dhiska ciidamada ayaa ku amray guddigii howshan u xilsaaray in aysan qaban karin shaqo uusan ogeyn, waxayna si toos ah u siiyaan warbixinadooda Xaafiiska Kheyre, iyagoo xariiro kala duwan ka dib sheegay in ay amar ku haystaan in aysan howlahaas faraha lagalin.
Tiradda ciidamadan oo ahayd 3000 kun oo katirsanaa ciidamada Daraawiishta Puntland ayaa hadda maraya hanaanka Tirokoobka casriga ah oo ay ku sameynayso Puntland, waxaana qorshahan uu yahay mid ay soo dhaweeyeen shacabka Puntland.
Xogo aanu helnay ayaa sheegaya in ay arrimaha bishii May isla soo qaadeen Madaxweynaha Puntland iyo Madaxweynaha Soomaaliya, uuna sheegay in uudhameystirayo laakiin aan ilaa hadda waxba ka hirgalin.
Ciidan cadow u dhis waa gacan-taada midig isku qawrac
Ku biir XISBIGA XORNIMADA PUNTLAND oo dadkaaga iyo dalkaaga cudud ciidan u noqo
Mareykanka oo duqeyn culus ka wada Jubbooyinka & Diyaaradda B-52 ayaa loo adeegsanayaa Duqeyntan.